Nasab2M – Khiyaamo&Hack – Talooyin Cheats Android
Nasab2M – Khiyaamo&Hack
Waxaa qoray maamulka | Diisambar 1, 2021
Ma waxaad tahay ciyaaryahan mise waa guulwade? Sahami NCSOFT's MMORPG mobilada shaxda ugu sareysa ee Kuuriyada Koonfureed marxalad caalami ah. Tijaabi awoodaada iyo kartidaada aduun dagaal badan oo ku baahsan labada qaaradood ee xamaasadda leh. NCSOFT's Lineage2 ee caanka ah waxay ku timaadaa mobilada si heer caalami ah halkaas oo kumanaan ciyaartoy ay u dagaalami karaan sareynta adduun furan oo immersive ah.. La kulma waa cusub oo ah MMORPGs gudaha Lineage2M.
Waagii cusbaa ee MMORPG ayaa yimid ▣
Lineage2M waxay ku faantaa 3D buuxa 4K UHD, qeexida ugu sareysa ee laga heli karo aaladaha mobilada. Iyada oo si fiican loo sawiray qaababka hubka iyo tibaaxaha dabeecadda oo faahfaahsan, Lineage2M waxay gaadhay heerka ugu sarreeya ee tayada sawirada. Tani waa ciyaartii ugu horeysay ee mobilada oo u ogolaanaysa in ka badan toban kun oo ciyaartoy inay ku soo ururaan hal goob oo ay ku dagaalamaan hal dagaal.
▣ DAGAALKA SARRAYNTA ▣
La ciyaar noocyo qani ah oo jinsiyado kala duwan iyo in ka badan 31 fasallo aan lumin horumarka heerka! Aadanaha, Elves, Madaw Elves, Dwarves, iyo Orcs waxay u dagaalamaan bililiqada iyo awooda labada qaaradood. Fasalada Lineage2M waxaa ka mid ah Knight seef-iyo-gaashaamo aadka loo qabsan karo, Dagaalyahan laba-blaab leh, Raider oo leh saxnaanta gacan-ku-dhiigle, Archer oo loogu talagalay dadka xiiseeya dagaalka, Wadaad ku shaqeysta Orbs ee awoodda bogsashada quduuska ah, iyo Saaxir leh Shaqaale sixir leh. Kor u qaad oo ururso hub cusub oo kor u qaad weydiimo shakhsi iyo qabiil oo joogto ah.
▣ SHARCI ADUUNKA GUULEYSTA ▣
Baadh ballaaran, cajiib ah, iyo duni furan oo furan oo u oggolaanaysa kumanaan ciyaartoy inay isku mar la kulmaan, u qaado weydiimo kala duwan, aduunkana qabsada. Labada qaaradood ee Cadan ee aan kala go'a lahayn waxaa lagu mari karaa lug ama iyadoo la adeegsanayo teleefanno iyo duullimaadyo qurux badan.. Iska hor imaad madaxda aduunka ee bahalnimada ah, guuldarada Anshaxa’ guutooyin ku yaal dhufeysyada Giran Castle, oo la saaxiib saaxiibbadaa tacaburayaasha ah ee tuulada Talking Isle.
▣ Lineage 2M Official Bulsho ▣
※ Si aad u hesho warar badan oo Lineage2M ah, hubi website-ka rasmiga ah!
※ Mareegaha: https://lineage2m.plaync.com/naeu/
※ Nagala soco baraha bulshada
Lineage2M oo leh PURPLE ▣
Marka laga soo xidho PC, PURPLE iyo Lineage2M waa la wada rakibi karaa.
▣ Lineage 2M waxay u baahan tahay ogolaanshahan soo socda si ay u ciyaarto fudud.
Waxaad isticmaali kartaa ciyaarta xitaa haddii aadan ogolayn xuquuqaha ikhtiyaariga ah.
* Ogolaansho ikhtiyaari ah
– Goobta kaydinta (sawirada qalabka, warbaahinta, faylasha): Ogolaanshaha lagu kaydinayo faylasha ka dib qabashada shaashadda iyo duubista fiidiyowga
– Maqal: Ogolaanshaha duubista Maqalka marka la duubayo muqaal
* Sida loo la noqdo gelitaanka
– ka dib markii lagu heshiiyey xaq u helida, waxaad dib u dajin kartaa ama ka noqon kartaa xaqa gelitaanka sida soo socota.
– Android 6.0 ama ka dib: Dejinta > Maareynta Codsiga > Nasab2M > Dooro ogolaanshaha > Ogow ama kala noqo ogolaanshaha gelitaanka
– Android hoosteeda 6.0: cusboonaysii nidaamka qalliinka si aad uga noqoto gelitaanka ama tirtirto abka
* Shuruudaha ugu yar: RAM 3 GB
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, Nasab2M
← Sawirka khiyaaliga ah – Khiyaamo&Hack Booliska Sim 2022 – Khiyaamo&Hack →